Yangu iPhone 7 Plus Iri Hissing! Icho Chaicho Chikonzero Nei. - Iphone
chii chinoshandisa data pane yako iphone
sei kudzima mapikicha maAlbum kubva ku iphone 5
Yangu iPhone 7 Plus Iri Hissing! Icho Chaicho Chikonzero Nei.
Iwe uri kutarisa vhidhiyo, uchitamba mutambo, kana kushandisa yako yaunofarira app pane yako nyowani nyowani iPhone 7 Plus uye cherekedza kune yakanyanya kupera simba kuridza muridzo ruzha rwunouya kubva kumashure kwechigadzirwa. Kunyangwe hazvo ruzha rusinganzwisisike, haugone kubatsira asi kushamisika kana paine chakashata ne iPhone yako. 'Aa murume,' unofunga iwe pachako, 'yangu nyowani iPhone yatotyoka.'
Neraki iwe, panogona kunge pasina chakaipa ne iPhone yako. Muchokwadi, iyi i 'nyaya' yakapararira iyo iri kutaurwa nenhamba yevanoshandisa iPhone 7 Plus pasi rese. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura nei yako iPhone iri kuridza muridzo kana kuchipisa uye zvekuita nezve iyo iPhone hissing speaker dambudziko.
Vatsva veI iPhone Varidzi Iti 'Boo! Hiss! ”
Vazhinji vashandisi ve iPhone 7 Plus vane yakashuma kunzwa a chaizvo kupera simba kurira kweruzha kunouya kubva kumashure kwe iPhone yavo. Izvi zvakataurwa kuti zvinoitika kana foni ichiita mamwe mabasa anoda iyo processor ye iPhone (aka: iyo 'brain' ye iPhone) kuti iite basa rakawanda - nemamwe mazwi, kana kuchipisa.
Semuyenzaniso, Ini ndinonzwa ruzha kana ndichirekodha vhidhiyo uye kuvhura maapp. Kune zvekare mishumo yekunzwa ruzha urwu kana uchichaja iyo ichangobva kuburitswa iPhone.
Nhoroondo Yake Iri Kuzvidzokorora Iga?
Pane kumwe kuongorora, vamwe vashandisi vakaona kuti dambudziko iri haringogumiri ku iPhone 7 Plus. Muchokwadi, kune akati wandei mishumo inotaura kuti muridzo unoridzirwa muripo uripo pamaPhones ekare zvakare, asi izvo zvakazoonekwa nekuti ruzha rwakange rwati rukure pazvinhu izvi. Zvakakoshawo kuziva kuti nekuti nzeve dzemunhu wese dzakasiyana, vamwe vanogona kunge vachinzwa maPhones avo achiridza muridzo zvakanyanya kupfuura vamwe.
Yangu Brand Brand Nyowani iPhone Yakaputsika?
Sezvo iyi iri nyaya yakapararira, ndinofunga zvakachengeteka kutaura kuti pane hapana chakaipa ne iPhone yako nyowani. Izvo zvakajairika zvemagetsi zvemagetsi mumakomputa, mafoni, uye chero chero chero chinhu chemagetsi kugadzira ruzha kana uchishandiswa kugadzirisa data kana kuita mamwe mabasa.
Nei yangu iPhone iri Hissing?
Yako iPhone iri kugadzira ruzha rwekupisa kana coil whine , kuridza muridzo kana kurira kwepamusoro kunoitika mumatunhu emagetsi pavanopisa kana kushandisa simba rakawanda. Iyo processor iri mukati me iPhone yako inopisa uye inoshandisa simba rakawanda kana uchiita mabasa akaomarara, ayo anopisa anokurisa mutauri uye zvinoguma nekuridza muridzo kana kurira kwepamusoro.
Kuti udzidze zvakawanda nezve ruzha rwe thermal uye coil whine, verenga izvi zvakanaka
Sezvo maPhones anotanga kuridza muridzo pavanopisa, gadziriso iri pachena ndeiyi: Chengeta yako iPhone inotonhorera. Uye unoita sei kuti yako iPhone itonhorere? Deredza mutoro pane yako iPhone processor. Kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekuchengetedza yako iPhone kutonhorera, verenga chinyorwa chedu nezve nei iPhones dzichipisa kutsvaga zvingangogadziriswa.
Iyi haisi mhinduro yakakwana, asi inogona kudzikisira iyo hiss, kunyanya kana dambudziko re software ne iPhone yako riri kuita kuti ripise zvakanyanya.
zvakarasika manotsi pane iphone 6
Ndatenda nekuverenga iyi vhezheni yePayette Pamberi! Isu tichava nechokwadi chekukuchengeta iwe uchivandudzwa riini uye kana Apple ichipa gadziriso yeiyo iPhone 7 Plus 'inonyangadza mutauri dambudziko. Kusvika panguva iyoyo, zorora waziva kuti yako iPhone iri kushanda nemazvo. Tiudze kana iwe uchinzwa yako iPhone 7 Plus ichiridza muridzo mune zvakataurwa, uye kunyanya kana iwe wawana chero mhinduro!